Faah faahin kasoo baxday dilki Bilal Al Barjaawi
Home Somali News Faah faahin kasoo baxday dilki Bilal Al Barjaawi
Faah faahin ayaa kasoo baxday dilki ay shalay diyaarado duuliye la,aan ah ugu geysteen duleedka Muqdisho Bilal Al Barjawi oo ahaa nin carab ah oo ka bar bar dagaalami jiray Xarakada Al Shaba.
Bilal oo ahaa nin kasoo jeedo asal ahaan dalka Lubnaan balse ku dashay kuna barbaaray dalka Britain ayaa ka tirsanaa hogaamiyaasha Al Qacida ee Geeska Africa, waxaana uu xiriir la lahaa hogaamiyaasha Al Qacida ee Jasiirada Carabta xarutooduna tahay Yemen.
Warar soo baxaya ayaa sheegaya in Mareykanku uu ku daba jiray ninkaan kadib marki xogtiisa laga helay telfoonada Al Qacidada Yemen iyo xog uu bixiyey nin Soomaali ahaa oo sanadki hore bilowgiisi Mareykanku ku qabteen Biyaha Bada Cas isaga kaasi oo isku xiri jiray Al Qacidada Yemen iyo kuwa jooga Soomaaliya.
Afhayeenka Al Shabab, Sheekh Cali Maxamuud Raage ayaa xaqiijiyey dhimashada Bilal Al Barjaawi isaga oo uga tacsiyeyey dhamaan mujaahidiinta caalamiga ah iyo kuwa Soomaaliya.
“Waxaan uga tacsiyeyneynaa dhamaan mujaahidiinta caalamka, qaasatan kuwa Soomaaliya, Shahaadada uu ILAAh waafajiyey walaalkeen Bilaal Al Barjaawi, walaalkaas oo asalkiisa kasoo jeeday wadanka Lubnaan, laakin ku dhashay kuna barbaaray dalka Ingiriiska, waxaa agagaarka Isbitaalka Al xayaat ku beegsaday diyaarado duuliye la,anta ah oo aan u maleyneyno kuwa cadawga Mareykanka,” ayuu yiri Cali Dheere.
Wali Mareykanka kama aysan hadlin duqeynta lagu dilay Bilal Al Barjaawi laakin wararka la isla dhex maraya ayaa sheegaya in ay u badantahay weerarkaasi inuu fuliyey Mareykanka.
Horay ayey Mareykanku uga fuliyeen Soomaaliya duqeymo ay u adeegsadeen diyaaradaha duuliye la,aanta ah, waxaa ka mid ah weerarki ay sanadki 2009 ku dileen Adan Ceyroow, iyo kii sanadki 2010 lagu qaarijiyey Saalax Cali Nabhaan.
Wasiirka arimaha dibadda oo shir kaga qeyb galay dalka Sacuudiga